दयाहाङ, बुद्धिसागर र खगेन्द्रका ‘सहर, साथी र सपना’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(June 26, 2019)
दयाहाङ, बुद्धिसागर र खगेन्द्रका ‘सहर, साथी र सपना’
दयाहाङ किन बाइक चढ्दैनन् ?
पुस ९, २०७५ सोमबार ९:२०:४९ | उपेन्द्रराज पाण्डेय
कास्की – ‘काठमाडौं : गिद्धैगिद्धको सहर, हेर्दा लाग्छ रहर ।’ निश्चल बस्नेत निर्देशित चलचित्र ‘लूट’ को चर्चित संवाद हो यो । चलचित्रमा सौगात मल्लले बोलेको यो संवादले धेरै कुरा बोल्छ । नेपालको सामाजिक अर्थव्यवस्था, राजनीति, विकास, अवसर सपना सबैसबै ।
यहाँ गिद्धलाई बिम्बका रुपमा हेर्न पनि सकिन्छ । त्यसो त काठमाडौंमा आजकल खासै गिद्ध देखिँदैनन् । पहिले पहिले नारायणहिटी आसपासका अग्ला रुखहरुमा गिद्ध देखिन्थे । आजकल रुख पनि बुढा भए । गिद्ध पनि हराउँदै गए । गिद्धको आहारा पनि सकिँदै गयो होला सायद । आहारा सीमित अनि गिद्ध धेरै भएपछि बिस्तारै समस्या नआउने त कुरै भएन ।
हो, काठमाडौंलाई आहारा बनाउने हामी हौँ वा गिद्ध उस्तै हो । आहारा भए पनि नभए पनि हामीलाई काठमाडौंकै रहर, यहीँकै सपना र यहीँकै अवसर चाहिने । सबैलाई काठमाडौं चाहिने । काठमाडौं सहरको सपना हरेक नेपालीले सजाएको हुन्छ । सबैभन्दा बढी त अवसरको खोजी वा सपना पूरा गर्ने कुरामा सबै नेपालीको पहिलो रोजाई बन्छ काठमाडौं । यसका पछाडि अनेकौँ कारण हुन सक्छन् । हाम्रो विकास प्रक्रियामा विकेन्द्रीकरणको कमीदेखि भएभरका अवसरलाई एकै ठाउँमा सीमित बनाउनु । विश्वविद्यालयदेखि कला, साहित्यसम्मका संरचनालाई काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित गरिनुले पनि यो सहरको सपना ठूलो थियो र छ ।
आ–आफ्ना सपना पूरा गर्ने ध्येयले त हामी सहर पस्छौँ । कतिले सपना चकनाचुर हुन्छन् र अर्कै बाटो रोज्छन् । कतिले विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गर्दै विरानो सहरसँग पौँठेजोरी खेल्दै आफ्नो सपना पूरा गर्न सफल हुन्छन् ।
आइतबार सातौँ नेपाल साहित्य उत्सवमा गाउँबाट आएर सहरसँग पौँठेजोरी खेल्दै आफ्ना सपना पूरा गर्ने तीन जना व्यक्तिले ‘सहर, साथी र सपना’ बारेमा आफ्ना अनुभव र भोगाई सुनाए ।
एकजना कालिकोट, अर्का भोजपुर र अर्काचाहिँ स्याङ्जाबाट आफ्नो सपना पूरा गर्न काठमाडौं छिरे । भोजपुरबाट आएका दयाहाङ राई अहिले नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका छन् । कालिकोटबाट आएका बुद्धिसागर नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा अग्लो नाम बनिसकेका छन् । कर्णाली ब्लूज र फिरफिरेमाफर्त उनले नेपाली पाठकको मन जित्न सफल भएका छन् । अर्का हुन् स्याङ्जाका खगेन्द्र लामिछाने, जो लेखन र कलाकारिता दुवै क्षेत्रमा जमेका व्यक्ति हुन् । तीनै जनाले काठमाडौंमा भोगेका दुःख र संघर्ष उस्तैउस्तै छन् । उनीहरुको संघर्ष धेरैको प्रतिनिधि घटना पनि हुन सक्छ ।
तीनैजना झण्डै १८ वर्षअघि आ–आफ्ना सपना बोकेर काठमाडौं आए । अहिले उनीहरुको सहर, साथी र सपना कस्तो छ त ?
उनीहरुकै शब्दमा सहर, साथी र सपना
बुद्धिसागर – खगेन्द्रसँगको भेट त ठ्याक्कै याद छैन तर दयासँगको भेटको प्रसंग भने रोचक छ । म पनि कुनै समयमा कलाकार बन्न चाहन्थेँ । एकजनाले ‘तिमी हेर्दा राम्रै देखिन्छौ, कलाकार बन्ने हो’ भन्नुभयो । तर नाटकबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभयो । नाटककार विजय विस्फोटलाई कलाकार चाहिएको थाहा पाएपछि म अडिसन दिन गएँ । दयासँग मेरो भेट त्यहीँ भएको हो । उ पनि कलाकार बन्न अडिसन दिन आएको ।
दयाले पछिल्लो चरणमा नेपाली चलचित्रमा परम्परावादी नायकको मान्यता भत्काएको हो । तर त्यो बेलाको सोचमा म फिट हुने रहेछु । त्यही भएर मैले राजकुमारको रोल पाएँ । दयाले चाहिँ दरबानको रोल थियो । तर रिहर्सल हुँदै गएपछि मेरो रोल छोटिँदै र दयाको बढ्दै गएर उ राजकुमारको रोल पाउनेभयो, मचाहिँ दरबानको भूमिकामा खेल्नु पर्नेभयो । त्यसपछि म यो नाट्य क्षेत्रबाट भागेँ । जब कर्णाीली ब्लूज बजारमा आयो । निर्देशक विस्फोटले भन्नुभएछ, यो केटोले भागेरै ठिक गर्‍याे ।
खगेन्द्रसँग कलाकारभन्दा पनि लेखकको रुपमा चिनेको हो उसलाई । उसले पत्रपत्रिकामा धेरै कथाहरु लेख्थ्यो । स्याङ्जाबाट आएको खगेन्द्र लामिछानेले सुरुसुरुमा धेरैले खला भनेरसमेत जिस्काए । खगेन्द्र, तिमी खलाबाट खगेन्द्र लामिछाने बन्नुमा कति संघर्ष गर्यौ ?
खगेन्द्र – मेरो नाम अप्ठ्यारो त होइन, तर कतिपय साथीभाइले मायाले भने होलान् । कतिपयले चाहिँ हेपेर पनि भने होलान् । त्यसमा चाहिँ कुनै गुनासो छैन । तर संघर्षका दिनहरुमा केही हासिल नगरेको अवस्थामा चाहिँ निकै कठिन हुन्छ । काठमाडौंमा मात्रै होइन, गाउँमै पनि यसले के पो गर्ला र भन्नेहरु थिए । तर त्यही कुरामा चित्त दुखाएर म अड्किएर बसेको भए मेरो बाटो पनि बदलिन्थ्यो होला सायद । अरुका कुरालाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेकै कारण होला, म खलाबाट खगेन्द्र लामिछाने बनेको ।
बुद्धिसागर – कवि श्रवण मुकारुङको वल्लो डाँडामा घर, दयाहाङ राईको घर पल्लो डाँडामा । श्रवण मुकारुङले मसँग एकपटक भन्नुभएको थियो, ‘मेरो घरमा बिहानै घाम आउँछ र बेलुकासम्मै रहन्छ तर दयाको आँगनमा घामै आउँदैन । घामै नदेखेको एउटा केटो आएर कलाकारिताको माध्यमबाट उज्यालो छरिरहेको छ ।’ दया तिम्रो काठमाडौं सपना चाहिँ के हो ?
दयाहाङ – श्रवण दाइले भनेझैँ मेरो घरमा बिहान १० बजेतिर एकछिन झुलुक्क देखा पर्छ घाम । पुर्खाहरुले नै त्यस्तो ठाउँ रोजे । काठमाडौं आउनुको सपना त्यही घाम खोज्नु थियो होला सायद । काठमाडौं आइसकेपछि मलाई आनन्द लागेको त्यही घाम थियो कि जस्तो लाग्छ । काठमाडौंमा हामी तीन जनाको संघर्ष उस्तै रह्यो होला ।
बुद्धिसागर – काठमाडौं आउने पहिलो मेरो सपना रचना छाप्ने नै थियो । मलाई आफ्नो नाम छापिएको हेर्ने ठूलो रहर थियो । कालिकोटमा प्रेस आएपछि मैले आफ्नो नामको ढड्डा नै छापेको थिएँ । मैले रेडियोमा पनि अति धेरै कविताहरु पठाउँथेँ । मेरो घरबाट काठमाडौं कोही पनि नआएको । मलाई चाहिँ काठमाडौं जान्छु जान्छु भन्ने हुटहुटी थियो । त्यसपछि काठमाडौं आउनका लागि मैले उच्च शिक्षामा पत्रकारिता विषय लिएर पढ्छु भनेँ । अरु विषय त सुर्खेतमै पनि थिए । पत्रकारिता पढ्न काठमाडौं नै जानुपर्ने ।
बुवालाई मैले पत्रकारिता पढ्छु भनेर कन्भिन्स गराएँ । रेडियोमा पनि नाम आउने, लेख्न पनि मन पराउने भएको भएर बुवाले मलाई पढ्न त भन्नुभयो । उहाँ म काठमाडौं जानुपर्ने भएपछि आफ्नै वचनमा पिल्सिन थाल्नुभयो । एसएलसीको मार्कसिटमा थरको आई छुटेकाले म काठमाडौँ आएँ । त्यसैबेला मैले आरआर कलेजमा भर्ना गरेँ ।
घर छाड्ने बेलामा आमाले मसँग भन्नुभयो, ‘हेर बाबु, काठमाडौं ठूलो सहर छ । आफन्त कोही पनि छैनन् । दुःख पर्दा रुने ठाउँ पनि हुँदैन । बिरामी पर्दा सहयोग गर्ने मान्छे पनि कोही हुँदैनन् ।’ तर ५–६ वर्षसम्म यस्तो अवस्था आयो कि कुनै बेला मैले तीन दिनसम्म पनि खाना खाइनँ । तीन दिनसम्म खाना नखाएको मलाई छिमेकी कोठाबाट प्रेसर कुकरमा सिट्ठी लागेर खानाको बास्ना आउँदा पनि अति प्रिय लाग्थ्यो । त्यो बेला चाहिँ आमाले भनेजस्तै लाग्यो । त्यसबेला मेरो संगत चाहिँ पाका व्यक्तिहरुसँग भएका कारण आफूलाई अगाडि बढाउने प्रेरणा पाएँ । अग्रज व्यक्तिहरुले पनि थुप्रै दिन भोकै बसेका र संघर्ष गरेका कुराहरु सुनाएपछि मैले अगाडि बढ्ने शक्ति पाएँ ।
त्यसबेला मैले निकै कविता पनि लेखेँ । त्यही कविताले पनि मलाई निराशामा जान दिएन । मेरो त त्यस्तो संघर्ष थियो, १८ वर्षको अन्तरालमा खगेन्द्रले चाहिँ कस्ताखाले संघर्ष गर्नुपर्‍याे ।
खगेन्द्र – काठमाडौंमा मेरो पनि जीवन चाहिँ असहज नै थियो । बुद्धिसागर र दयाहाङले जस्तै नै संघर्ष गरेको भए पनि मैले भोकै चाहिँ बस्नु परेन । काठमाडौंमा मेरा चाहिँ आफन्तहरु थिए । पढ्न बसेका दाजुभाइहरु थिए मेरा । म उनीहरुसँगै बस्थेँ । २ वर्ष पोखरा बसेँ म । नाटक र कलामा मोह जागेपछि मेरो सपनाको सहर काठमाडौं होला जस्तो लाग्यो र काठमाडौं गए । २०५७ साल कात्तिक ९ गते मैले बुवाले दिएको ५० वटा सयको आईसी नोट बोकेर काठमाडौं गएँ । त्यही पाँच हजार भारुबाट मेरो संघर्षका दिन सुरु भए । पछि बुवासँग पैसा माग्न पनि सकिएन, आफूले केही गर्न पनि सकिएको छैन । छोरोले के गर्छ ? भनेर गाउँमा परिवारलाई सोधिन्थ्यो । नाटक खेल्छ भन्दा ‘कामचाहिँ के गर्छ ?’ भनेर सोध्ने पनि थिए ।
ऋणले अत्याएपछि बुवाले केही जग्गा पनि बेच्नुभयो । त्यसपछि मैले बुवालाई ‘विदेश जान्छु’ भनेँ । त्यसपछि बुवाले भन्नुभयो, ‘काम गर्न पनि विदेश जान्छन्, विदेश त घुम्न जाने हो ।’ बुवाको त्यो भनाईले मलाई ठूलो शक्ति दियो । म पासपोर्ट बनाएर पनि विदेश गइनँ । म फेरि काठमाडौं फर्किएँ । तीन वर्षसम्म दसैँमा म घर पनि गइनँ । बुवालाई मैले एकैदिनमा तपाईँको ऋण तिरिदिन्छु भनेको थिएँ । काठमाडौंमा मैले राम्रै काम पाएँ । बीबीसी मिडिया एक्सनमा आफैलाई मन पर्ने काम पाएँ । आफूले कमाएको जम्मा गरेर, बैंकबाट अलिकति ऋण निकालेर मैले बुवाको ऋण एकैदिनमा तिरिदिएँ । त्यतिबेला चाहिँ एउटा चरणको संघर्षबाट पार पाएँ जस्तो लाग्यो । तर जीवन सधैँ संघर्षमै हुन्छ ।
बुद्धिसागर – दयाहाङ पनि एउटा लुकेको कवि । संघर्षकालमा हामी दुइटै कवि । दयाहाङ कवि भएन कविता भयो । उमाथि संगीत श्रोताले निकै राम्रो कविता लेखेका पनि छन् । दया तिमी त कवि हुन हिँडेको मान्छे, हिरो कसरी भइयो ?
दयाहाङ – सायद सहर हेर्ने सपना थियो होला । मैले एसएलसी एकैपटकमा पास गरेको भए अर्कै हुन्थ्यो होला कुरा । विद्यालयमा म चौथो हुन्थेँ । तर मलाई विज्ञान विषय लाग्यो । असारको मौसम थियो । बुवा र म खेतका आली कोट्याउँदै थियौँ । मेरो भाइले रिजल्ट लिएर आउँदै थियो । उसले नसुनाउँदै मैले थाहा पाएँ कि म फेल भएको रहेछु भन्ने । उ बहुत निराश हुँदै आएको थियो । मलाई चाहिँ अंग्रेजी नै लाग्यो होला भनेको थिएँ तर विज्ञान लागेछ ।
त्यो वर्ष मैले घरको खेतका मात्रै होइन, अरुका खेतका आली पनि कोट्याएँ । त्यहीबेला यति धेरै भावुक भएँ कि कविता कोर्न थालेँ । एक वर्ष कुरेर विज्ञान विषयको परीक्षा दिएँ र पास भएँ । बुवाआमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेको भए तँ पनि विराटनगर पढ्थिस् होला, काठमाडौंमै जान्थिस् होला ।’ त्यतिबेला आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा कविता रोजेँ । त्यसपछि मैले जिल्ला सदरमुकाममै पढ्न थालेँ । १८ वर्षको उमेरमा अर्को अचम्म पनि भयो । पहिलो पटक मैले चतरामा गाडी देखेँ । मैले जोग्राफी पढेको थिएँ । टुरका लागि म बागलुङ गएँ । तर जोग्राफी पढेको मान्छे मैले काठमाडौंलाई मापन गर्नै सकिनँ । निकै टाढा लाग्थ्यो ।
काठमाडौं चाहिँ आफूलाई अलि धेरै अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ कि भनेर आएँ । हुटहुटीकै कारण कविता लेख्थेँ । तर सुनाउने हिम्मत चाहिँ हुन्थेन । आफू के बन्ने भन्ने त खोज्दै जाने कुरा रहेछ । घामै नदेखेको मैले सपनै पो देखिन होला । तर नाम खोज्दै जाँदा काठमाडौंमा विजय विस्फोटको कार्यशालामा सहभागी भएँ । लेखक बन्छु भनेर कार्यशाला गएको पछि म अभिनयमै रुची र दख्खल भएजस्तो लाग्यो । अनि लेखनबाट अभिनयमा लागेँ ।
बुद्धिसागर – हामी तीनजनाले काठमाडौंमा उस्तैउस्तै संघर्ष गर्यौँ । तर हामीले आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिको संगत गर्यौँ त्यसले पनि केही सहज भयो ।
हामी तीन जनामा दया र मलाई चाहिँ बाइक चलाउन आउँदैन । खगेन्द्रलाई चाहिँ बाइक पनि आउँछ, गाडी पनि आउँछ । मलाई त लेखकका रुपमा गाडी वा बाइकको अवाश्यकता पर्दैन । मैले त बाइकबिनै प्रेम गरेँ र बिहे गरेँ । त्यसैले अहिले आएर किन चाहियो जस्तो पनि लाग्छ । मलाई त चाहिन्न । कलाकारका रुपमा त दया तिमीलाई त चाहिन्छ नि । यत्रो समयमा पनि तिमीले बाइक चढ्ने आँट चाहिँ किन नगरेको ?
दयाहाङ – आँट भएको भए त चढिहाल्थेँ नि ? १८ वर्षको उमेरमा त पहिलो पटक गाडी देखेको । ‘कबड्डी’ चलचित्रमै पनि बाइक चलाउन पर्छ भनेका थिए । विजय बरालले चलायो । मैले एउटा डायलग नै बोलेँ, ‘यो मेसिनसँग चाहिँ नसकिने रहेछ ।’ यो मेरो लागि नै बनाइयो । ‘पुरानो डुङ्गा’ का लागि बाइक सिक्नैपर्छ भनेपछि म सिक्न पनि गएँ । त्यति नै बेला मेरो एकदमै मिल्ने साथी कलाकार रविन पाण्डे मोटरसाइल दुर्घटनामा परेर बितेपछि, मेरो मन नै चुँडियो । म पनि साथीहरुसँग हिँड्दा दुई पटक सानोतिनो दुर्घटनामा परेकाले आँटै आएन । सबैभन्दा बढी मलाई डर नै लाग्छ ।
एयरपोर्ट पछाडि सिक्न पनि गएँ । तर सकिनँ । रातभरी सपनमा पनि कालो घोडाले लखेटेको लखेट्यै गर्‍याे । त्यसपछि मैले रामबाबु गुरुङलाई भनेँ । उहाँले उपाय निकाल्छु भन्नुभयो । त्यसपछि अर्को मिक्सिङ जोडेर बाइक चढेको दृश्य तयार भयो ।
बुद्धिसागर – खगेन्द्रलाई त सबै आउँछ है ?
खगेन्द्र – सबै त आउँदैन । घोडादेखि चाहिँ डर लाग्छ ।
दयाहाङ – घोडादेखि चाहिँ मलाई डर लाग्दैन । दुई पटक लडेको पनि छु । घोडा त जनावर हो नि त्यही भएर मलाई डर लाग्दैन ।
बुद्धिसागर – खगेन्द्रको एउटा स्वभावचाहिँ सहन नसक्ने । उसको आक्रोश एक्कासि बढ्छ । यस्तो स्वभाव हुनुको पछाडि केही कारण त होला पक्कै ?
खगेन्द्र – मेरो स्वभाव कसरी यस्तो भयो भन्ने त ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन । तर म सानोदेखि नै प्रतिक्रिया जनाउने खालको थिएँ । बुवासँगै पनि मेरो अत्यन्तै घनिष्ठ र अत्यन्तै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो । बुवाले मलाई ट्रयाकमा ल्याउन एकदमै कुट्नुहुन्थ्यो । बुवालाई मलाई पढाउने रहर, मचाहिँ कसरी पढ्नु पर्दैन भन्दै भाग्दै हिँड्ने । बुवाले कुट्नुहुन्थ्यो, तर बुवासँग नै प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने । त्यसरी नै मेरो स्वभाव बन्दै गयो होला ।
मेरो स्वभाव कसैको नराम्रो नचाहने छ । सबैको राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु । त्यसैले कसैले मेरो कुभलो चिताएको वा मलाई खसाल्न केही गरेको थाहा पाएँ भने निकै नराम्रो लाग्छ । त्यस्तो अवस्थामा कडा स्वभाव प्रस्तुत गर्छु । कतिपय अवस्थामा मैले दयाहाङहरुसँग पनि त्यस्तै व्यवहार गरेको छु ।
बुद्धिसागर – १८ वर्षको अन्तरालमा विभिन्न व्यक्तिकोहरुको प्रेरणा प्राप्त गर्दै खगेन्द्र अनि दयाहाङ यहाँसम्म आइपुगे । लेखकका रुपमा म अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरुसँग कुराकानी गरेर प्रेरणा लिने प्रयासमा हुन्छु । तिमीहरु चाहिँ अहिले कसको प्रेरणा लिन्छौँ ?
खगेन्द्र – प्रेरणाको स्रोत भन्ने कुरा समयअनुसार हुने रहेछ । एकसमय अग्रज व्यक्तिहरुको प्रेरणामा अगाडि बढिन्छ । तर आफूले केही गर्न थालिसकेपछि भने प्रेरणाका स्रोत व्यक्ति फरक हुने रहेछन् । कलाकारिता क्षेत्रमा त सामान्य व्यक्तिहरु प्नि प्रेरणाका स्रोत बन्छन् ।
बुद्धिसागर – खगेन्द्र भावुक पनि छन् । उनको चलचित्र ‘पशुपति प्रसाद’ सँगै हेर्न गयौँ । चलचित्र हेर्दाहेर्दै कुनाबाट सुँक्कसुँक्क आवाज आयो । यसो हेरेको त खगेन्द्र नै पो रुँदै रहेछ । किन रोको भनेको त ‘यसपछि सिरियस सिन छ त्यही भएर’ भन्ने जवाफ आयो ।
खगेन्द्र – म चलचित्र हेर्दा मात्रै होइन, लेख्दा पनि रुन्छु । आफैलाई छोएको कुराले दर्शकलाई पनि छुन्छ ।
बुद्धिसागर – हामी त रोएका छौँ । तर दया रोएकोचाहिँ सम्झना छैन । दया तिमी अभिनेताका रुपमा त रोएका छौ, फिल्म हेर्दा पनि रुन्छौ होला । व्यक्तिका रुपमा चाहिँ कत्तिको रुन्छौँ ?
दयाहाङ – नरुने मान्छे त को नै होला र ? तर म मेरो आँसुलाई लुकाउन चाहन्छु । मेरो परिवारको जिम्मेवार मान्छे आफै भएकाले म रोएँ भने परिवारका सदस्य कमजोर हुन्छन् भन्ने ठानेर रुँदिनँ । रुनै परे पनि एकान्तमा रुन्छु म । सबैले गर्छन् होला त्यस्तो । सिनेमा हेर्दा पहिले त रुन्थेँ । आजकल चाहिँ रुँदिनँ । एक्टर हो नि त । एक्टिङ गर्दिन्छु नरोएको ।
अन्तिम अपडेट: असार ७, २०७६
उज्यालोमा कार्यरत उपेन्द्रराज पाण्डेय कला, साहित्य र संस्कृतिमा कलम चलाउनुहुन्छ ।
जेठ १५ नेपालीको विजयको दिन हो : प्रधानमन्त्री ओली
एथ्लेटिको मड्रिडले जित्यो युरोपा लिगको उपाधि
विदेशबाट फर्केका युवाको सीप प्रमाणीकरण गर्ने
विश्वकप क्रिकेट: पच्छ्याउला त पाकिस्तानले अपराजित न्युजिल्याण्डल...
असार ११, २०७६ बुधबार
शाहीद कपूरको ‘कबिर सिंह’ ले पाँच दिनमै कमायो १०० करोड
आइएमई पे र आईसीएफसी फाइनान्सबीच सम्झौता
साउदी अरब किन कोहीसँग पनि डराउँदैन ?
एएफसी कप: मनाङ जितविहीन बन्दै प्रतियाेगिताबाट बाहिरियाे, चे...
पाँचथरको फलैँचामा पहिरो: वर्षाका कारण राहत टोली पुग्न सकेन...
त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग मर्मत: रातभर काम, तर तोकिएको ...
दुई घण्टा ढिलो सुरु भयाे का‌ंग्रेसकाे छलफल: शीर्ष नेता समयमै...
चट्याङबाट मृत्यु भएका बालकका परिवारलाई किरिया खर्च प्रदान
मन्त्री फेर्ने हल्ला र वास्तविकता
सुस्त मनस्थिति भएकी महिलालाई गर्भ बाेकाएर असी हजारमा अर्कै यु...
माथिल्लो तामाकोशीको पाइप जडानको काम सुरु
सरकार कमजोर बनाउन मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकाे हल्ला फैलाइयाे: मन्त्...
नगरपालिकाले कारबाही गरेका प्रधानाध्यापकद्वारा कार्यालयमा तोडफोड
सचिन तेन्दुलकरका छोरा अर्जुन विश्वकपमा इंग्ल्याण्ड टिमलाई सघाउँदै
पाकिस्तानलाई किन १९९२ कै इतिहास दोहोरिन्छ जस्तो लागेको छ ?
नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यालन बन्द गर्नेविरुद्ध सीआईबीमा उजुरी, पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग
एसईईको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा, यसरी हेर्न सकिन्छ
देश पुनः द्वन्द्वमा छिरेको छ, तर पहिलेजस्तो भयावह हुँदैन
असार ८, २०७६ आइतबार
डेंगुको डर : गाडीसँगै लामखुट्टे पहाड र हिमाल चढे, अनि संक्र...
असार ५, २०७६ बिहिबार
गुठी र सँस्कृतिलाई अलग राखेर हेर्न सकिँदैन
असार १, २०७६ आइतबार
गाउँका ‘राजा’ : कहिले काम खोज्दै परदेश, कहिले गाउँपाखा
कीर्तिपुरमा ‘प्लाष्टिक पिच’
५३ वर्षमा दोस्रो बिहे गरेकी राममाया
विदेशमा हुनुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गर्नुभएन भने जेल सजाय हुन ...
असार ६, २०७६ शुक्रबार
बाध्यताले फेरि विदेश जानुपर्ने बनायो
असार ३, २०७६ मंगलबार
सरकारले उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यको जिम्मा लिए विदेश जाने...
जेठ २९, २०७६ बुधबार